ဖုန်းချစ်သူ - Home | Facebook
See more of ဖုန်းချစ်သူ on Facebook
3,501 people like this
3,492 people follow this
Contact ဖုန်းချစ်သူ on Messenger
ပြည်တွင်း ပြည်ပ အလုပ်အကိုင်များ
ဖုန်းကောင်း ဖုန်းပျက်သုံးလို့ရသော Lcd tauch များ ရောင်း/ဝယ်ရေး
MM Gift Card Selling
ဖုန်းချစ်သူ sharedaPage.
Coc အတွက် gem ဝယ်ချင်တာ ဖြစ်ဖြစ်
Viber out call အတွက် မီနစ်ဝယ်ချင်ဖြစ်ဖြစ်
အသုံးပြု ဖို့ google gift card ရောင်းတဲ့ page လေးပါ
ဈေးလည်းသက်သာတယ်ဆိုတော့ like လုပ်ထားသင့်တဲ့ page တစ်ခုပါဘဲ
စိန့် အဖြူသန့် တွေကို မှကြိုက်တဲ့ သူတွေ Like လုပ်ထားသင့်တဲ့ page တစ်ခုပါ
ဖုန်းချစ်သူ shared အမျိုးကောင်းသား's photo.
Zapya ဆိုတာဘာလဲဆိုပြောစရာမလိုလောက်တော့ဘူးနဲ့ တူတယ်။
အခု PC အတွက် Zapya ထွက်ရှိလာပါပြီ။IOS ရော Android ရော ချိ...တ်ပီး
သီချင်းတွေ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ဖိုင်တွေ ရှယ်လို့ ရပါတယ်။စမ်းကြည့်တာတော့အိုကေတယ်။
သုံးပုံသုံးနည်းကတော့ ဆော့ဖ်ဝဲဖွင့်လိုက်တာနဲ့hotspot ထောင်ပီးသားပဲ။Password
ရော တစ်ခါတည်းခံပီးသား။လွယ်ပါတယ်။ရှယ်ရတာလည်း မြန်တယ်။
MRTV4ကို အွန်လိုင်းကနေ ကြည့်ရပြီဆိုတာ တော်တော်များများ သိနေပါပြီ
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာ ဖုန်း Player ကနေ ကြည့်တဲ့နည်းကလေး မျှဝေချင်ပါတယ်...
ဖုန်းအတွက်တော့ လိုင်း သိပ်မကောင်းလည်း အဆင်ပြေပြေ ကြည့်လို့ရပါတယ်
သိတဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ ကျော်သွားပေါ့ဗျာ
မသိတဲ့ သူငယ်ချင်းများကတော့ လေ့လာပေါ့ဗျာ
ProMyanKey လို့ ခေါ်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် ဗားရှင်း အသစ်ထွက်ရှိ
ProMyanKey လို့ လူသိများခဲ့တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ်လေးဟာ အခုဆိုရင် နောက်ဗားရှင်းအသ...စ်
တစ်ခုအနေနဲ့Update လေးထွက်လာခဲ့ပါပီ။ဒီကောင်လေးက သုံးရတာ တော်တော်သွက်
တယ်။ကီးဘုတ်တွေက မကြီးလွန်း မသေးလွန်းတဲ့အတွက် စာရိုက်ရာမှာ တော်တော် အဆင်
ပြေတယ်။ပီးတော့ ဒီဇိုင်းက ရိုးရိုးလေးနဲ့မျက်စိနောက်သက်သာတယ်။မြန်မာကီးဘုတ်တွေ
က ..............See More
Android ဖုန်းတွေအတွက် စောက်ရမ်းမိုက်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် အသစ်ထွက်ရှိ
Android ဖုန်းတွေအတွက် Sulfur's Myanmar Keyboard လို့ ...ခေါ်တဲ့ မြန်မာကီးဘုတ် အသစ်ထွက်ရှိလာပါပြီ။ဗားရှင်း 1.0.12 ပါ။Keyboard Theme ကိုလည်း မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။စာလုံး အဆင့်တွေရိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့စာလုံးက ဖိထားလိုက်ပါ။ဒါဆိုစာလုံးအဆင့်တွေ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကီးဘုတ်ကို English-Myanmar ပြောင်းချင်ရင်Space Bar ကိုဖိပြီး ဘယ်ညာ ပွတ်ဆွဲရုံနဲ့Keyboard ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။လိုချင်ရင်တော့အောက်ကလိပ်စာမှာရယူလိုက်ပါ။
Internet Download Manager 6.18 Build4(27.10.2013) (5MB)
ဒေါင်းလော့မန်နေဂျာအသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အပ်ဒိတ်လေးထွက်လာပြန်ပါပီ....
Next Launcher 3D v2.06 Apk 11MB
10လပိုင်း 26 ရက်နေ့ ထွက်Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ...
Share4mm.com is the File Sharing Website that support Myanmar Language & other Best Features !!
Torrent Access for Premium Users, Resume Links for all and Best Support For All.
Videoder (One Click Video Downloader) v3.1 apk for Android
TubeMate က အခုနောက်ပိုင်းဒေါင်းရတာအဆင်မပြေတော့ဘူး။
ဒီကောင်လေ...းက TubeMate နဲ့ တူတယ်။video quality ရောရွေးပီးဒေါင်းလို့ 
ရတယ်။မိမိစိတ်ကြိုက်video ပေါ်ကလစ်တစ်ချက် နှိပ်တာနဲ့ ဒေါင်းရုံပဲ။တော်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။စတိုင်ကလည်း ရိုးရိုးလေးရယ်။မျက်စိနောက်သက်သာတယ်။သုံးချင်ရင်တော့အောက်ကလိပ်စာမှာယူလိုက်ပါ။
Android ဖုန်းပေါ်မှာ PSP ဂိမ်းတွေဆော့လို့ ရပီနော်
ဘယ်လိုပြောရမလဲ ဗဲရီးဂွတ်ပေါ့......နော့ :D ။တကယ်ဆော့လို့ ရတယ်နော်။
ကိုယ့်ဖုန...်းရဲ့ROM ပေါ်မူတည်ပီး အနှေးနဲ့ အမြန်ဆော့လို့ ရပါတယ်။S2 နဲ့ တော့စမ်းပီးပီ။အိုကေတယ်။PSP ဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲ တွေကိုတော့မတင်ပေးတော့ဘူးနော်။
ဆိုဒ်ကြီးတွေက အယ်စတုန်ကြီးတွေမလို့ ။SD card ဆိုဒ်ကြီးကြီးသာပြေးဝယ်ထားလိုက်တော့။
နောက်ဆုံးပေါ် Android ဖုန်းတွေနဲ့ ဆို ပိုဆော့လို့ ကောင်းမှာ။
PC မှာ Viber ကို မြန်မာလိုရမြင်ရအောင်လုပ်လို့ ရပါပြီ
Myanmar Mobile User Group က ကိုညီညီရေးထားတဲ့ပို့ စ်လေးတွေ့ လို့ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတ...ယ်။အောက်မှာပေးထားတဲ့လိပ်စာကနေ ဒေါင်းထားတာကို မထည့်ခင်
သုံးနေတဲ့ application အားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပါ။ပိတ်ပီးရင် ဒေါင်းလို့ ရတဲ့ ဟာကို font folder ထဲမှာ သွားထည့်လိုက်ပါ။replace လို့ မေးလာရင် ok လို့နှိပ်လိုက်ပါ။
Asphalt 8 Airborne APK OBB DATA 1.0.4 Modded Unlocked Tracks Buy Cars Samsung Store Android 880MB
Asphalt 8 ကိုတော့ ဘာဂိမ်းလည်းဆိုတာ ပြေ...ာစရာမလိုတော့ဘူး
သူကိုကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Modded Unlocked လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့ အကြိုက်တွေ့မှာပါ
ကျွန်တော်ကစားလို့ အဆင်ပြေလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်တာပါ
အမျိုးကောင်းသား(ပြန်လည်ဝေမျှခြင်း) v1.0 apk for andorid
Android ဖုန်းပေါ်မှာတင် အမျိုးကောင်းသားဆိုဒ်ကို အလွယ်တကူဝင်ကြည့်လို့ ရအော...င်
apk လေး ဖန်တီးထားပါတယ်။www.amyokaungtarr.com မှာတင်သမျှကို
အချိန်နဲ့ တပြေးညီကြည့်လို့ ရတာပေါ့။ပီးတော့ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ 
ပြည်တွင်းသတင်းတွေပါ ကြည့်လို့ ရအောင် သစ်ထူးလွင်ဆိုဒ်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်။
၀င်ပီးရင် နောက်တစ်ခါ offlineနဲ့ ဖွင့်ကြည့်လည်းရပါတယ်။
အမျိုးကောင်းသားဆိုဒ်ကို ဒီအတိုင်း browser နဲ့ ဝင်ကြည့်ရင်တောင် တော်တော်လေးကြာမှ page တစ်ခုလုံးမြင်ရတာပါ။ဒီကောင်လေးက စက္ကန့် ပိုင်းလေးနဲ့ တင် post တွေမြင်ရပါတယ်။File size ကလည်း သေးသေးလေးဖြစ်တာကြောင့် စက်ကိုပေါ့ပေါ့နဲ့ သုံးလို့ ရတာပေါ့။
ဖုန်း Free ပြောချင်သူတွေအတွက်Dingtone v0.9.11 Apk 14MB
ဒီဆောစ့်ဝဲလ်လေးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကနေ နိုင်ငံခြားကို ဖုန်း free ပြောချင်သူတွေအတွက်
အသုံးဝင်မယ်ဆောစ့်ဝလ်လေးပါ ဖုန်းအခေါ်ခံရမယ်သူမှာ အင်တာနက်ရှိစရာမလိုပါဘူး...
ဆောစ့်ဝဲလ်ကို စတင်အသုံးပြုတာနဲ့ 25 Creadits ရပါတယ်
စင်္ကပူ မလေးရှား ထိုင်းတို့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် တစ်မီနစ်ကို 1.57 Creadits ကျပါတယ်
ပြီးတော့ အကောင့်ဖွင့်တဲ့အခါ ဖုန်းနံပတ်နဲ့မဖွင့်ဘဲနဲပ face book နဲ့ဖွင့်ပါ
ဒါဆို Dingtone ဆောစ့်ဝဲလ်လေးအသုံးပြုပြီး face bookနဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားသူအချင်းချင်း
ဖုန်း free ပြောလို့ရပါတယ် မပြောခင် အင်ဗိုက်လုပ်ထားဖို့တော့လိုတာပေါ့
Creadits ပြန်ဖြည့်ဖို့အတွက် သူပေးထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကိုဒေါင်းရင်
Creadits ပြန်ရပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ
ဖုန်းမှာ မြန်မာစာအမှန်မြင်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်4Myanmar face book v1.0 Apk 1Mb
4Myanmar FB လေးက September 19, 2013 မှာ ထွက်လာတဲ့ ဆောစ့်ဝဲလ်လေးပါ
4 Myanmar Face book Apk ကိုတော်တော်များများ မသိသေးလောက်ပါဘူး ...
အဓိကတော့ root မလုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ အသုံးတည့်ပါတယ်
ဇော်ဂျီရော ယူနီကုတ် နှစ်မျိူးစလုံး အမှန်မြင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်
မှုရင်း Face book လိုပါဘဲ ကွန်မန့်ပေးတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံပါထည့်ပေးလို့ပါတယ်
Status ရေးတဲ့အခါ felling လည်းထည့်လိုရပါတယ်
ဂရုတွေထဲဝင်တဲ့အခါမှာလည်း မြန်မာစာကို အမှန်ကိုမြင်ရပါတယ်
Neews Feed လည်းအပ်ဒိတ်ဖြစ်ပါတယ် ဒီလောက်ဆို မြန်မာအမှန်မမြင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
အဆင်ပြေလောက်ပါပီ အသုံးပြုမယ်ဆို အောက်ကလိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
ဖုန်းချစ်သူ shared အမျိုးကောင်းသား's post.
ဘာကွ... မြန်မာငွေ ပါမလာဘူး။ ဟုတ်လား။ မင်းတို့ဆီက စင်ကာပူဒေါ်လာကဒီမှာသုံးလို့
ရမယ်ထင်လို့လားကွ။"လူ...ဝင်မှု အရာရှိ၏ ဟိန်းဟောက်မှုကြောင့် အဆိုပါ စင်ကာပူသား ခေါင်းလေးပုဝင်သွားသည်။
ထို့နောက် မြန်မာစကား မပီကလာ ပီကလာဖြင့်
"ကျနော်ရှာဝယ်ပါသေးတယ်။ မရလို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ ထိုင်းဘတ်ပဲ
ဝယ်လာခဲ့တာပါ။မြန်မာ အကြွေတွေတော့ နည်းနည်း ပါပါတယ်။" ဟုဆိုကာ တဆယ်ကျပ်တန်
နှင့်ငါးဆယ်တန် တရွက်စီ ထုတ်ပြသည်။
ဒါနဲ့ မင်းက ဒီပိုက်ဆံလောက်နဲ့
ဘယ်မှာနေမှာတုန်း။ မှန်းစမ်းဗီဇာလျှောက်တုန်းက ထောက်ခံသူမှာ ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
အော်... မင်းကဘုန်းကြီးကျောင်းက ထောက်ခံချက်နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေမှာပေါ့။
အခုမင်းလာတာ အလည်ဗီဇာနဲ့နော်။ အလုပ်လုပ်လို့ မရဘူး။ နားလည်တယ်နော်။
တောက်တိုမယ်ရအလုပ်လေးလျှောက်။ အခြေအနေမကောင်းရင် ခဏပြန်ထွက် ပြီးရင်ပြန်ဝင်။
ကဲ.. ကဲ... သွားတော့။လူဝင်မှု အရာရှိရှေ့မှ
ဘေးမှကြည့်နေမိသည်။ အော်.. တော်တော်ခက်တဲ့ စလုံးသားပဲမအူမလည်နဲ့။
နိုင်ငံသားများအတွက်က လွယ်သည်။ ID Card ကိုတင်ပေးလိုက်သည်နှင့်
အချက်အလက်များအားလုံးယူပြီးသားဖြစ်သွားသည်။ ထိုနောက်အလိုအလျောက် Update
လုပ်သည့် စက်ထဲ ပတ်စ်ပို့ ထည့်လိုက်လျှင် တံဆိပ်တုံးထုပြီးသားဖြစ်သွားသည်။
ရှိုးမန်းနီး ဘာညာပြစရာမလို၊ နိုင်ငံသားတိုင်းတွင် ပတ်စ်ပို့နံပါတ်တခုစီအတွက်
ဘဏ်အကောင့်ရှိထားပြီသား။ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဘဏ်မှာမဆိုပိုက်ဆံထုတ်လို့ရသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်း ငွေကြေးယူနစ်ကို ကျပ်ဖြင့်သာတွက်၍ပြောတော့သည်။
ဘယ်နိုင်ငံသွားသွား ပတ်စ်ပို့ အနီရောင်လေးမြင်လိုက်တာနဲ့ အိုကေ။
မြန်မာနိုင်ငံသားများကလည်း တချိန်ကနာမည်ကြီးခဲ့သော အမေရိကန်ကို
တော်သေးတာတခုက မြန်မာနိုင်ငံက အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလက်ခံနေသေးတာပင်။ ဒေါ်လာ၊ ပေါင်၊
ယူရိုစသည့် တို့နှင့်အိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံ ငွေကြေးလောက်သာ မြန်မာက
လက်ခံသည်။ ဒါတောင်CurrencyExchange မှာလဲပြီးသုံးရသည်။ တိုက်ရိုက်သုံး၍မရ။
မြန်မာနိုင်ငံထဲဝင်ချင်သူများအဖို့ အတော်ခက်ခဲသည်။ နိုင်ငံအတွင်းရှိ
ထောက်ခံပေးမှသာလျှင် ဗီဇာရနိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သူများအဖို့ဘုန်ကြီးများဆီ
အပူကပ်ကာ ဗီဇာရအောင်လျှောက်ပြီး နေလျှင်လည်းဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်နေလေ့ရှိသည်။
သို့သော် သူတို့ အပြောအရမြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းများမှာ ဂျပန်၊
အမေရိကန် နှင့်အင်္ဂလန်ရှိ ဟော်တယ်များထက် ပိုသာသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဗီဇာက
တလခန့်သာရလေ့ရှိရာထိုအတောအတွင်း အလုပ်လေးတခုရအောင် လျှောက်ကြရသည်။ ယခင်က
ဘုန်းကြီး ကပ္ပိယလုပ်လိုသူများအတွက် ကပ္ပိယဗီဇာပေးသော်လည်းအကြံအဖန်များလာသဖြင့်
ထိုဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကို ရပ်နားထားရသည်။ ယခင်ကအာဆီယံ နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်များကို
ဗီဇာစည်ကမ်းများလျော့ပေါ့ပေးရာ စင်ကာပူ၊မလေးမှ အကြံအဖန်များဝင်လာခြင်း၊
ကောင်းကောင်းမတတ်၊ ရှိုးမန်းနီးလဲ မပါသလောက်၊ လာတော့ တိုးရစ်ဗီဇာ။
ဒါကြောင့် ဟိုတလောက ဂျာနယ်မှာဖတ်လိုက်ရတာ လေဆိပ်ကပြန်လွှတ်ရတာ အယောက်
၂သောင်းကျော်သွားပြီဆိုပဲ။ ခုနက စလုံးသားလောက် မြန်မာစကားပြောတတ်မှ
အလုပ်ရနိုင်သည်။ မဟုတ်လို့ကတော့ လာပြီး ငွေကုန်လူမောတာပဲ အဖတ်တင်မယ်။
အားကစားဘက်ကိုကြည့်ဦးမလား။ လစာအကောင်းဆုံးရသည့် နေရာဆိုလို့ MyanmarNational
League (MNL) သာရှိသဖြင့် ဘရာဇီး၊ အာဂျင်တီးနား၊
ဂျာမနီစသည်တို့မှ ဘောလုံးသမားအားလုံး လာရောက်ကစားရသည်။ MNL
ကမ္ဘာ့အဆင့် ဘောလုံးသမားဟု မသတ်မှတ်ကြ။